संविधान संशोधनको तयारीमा सरकार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । यसका लागि (ने क पा) का शीर्ष नेता आफैंले संवाद अघि बढाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको मागबमोजिम सरकारले संशोधनको तयारी सुरु गरेको हो ।
राजपा नेपाल र फोरम नेपालले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे संविधान संशोधन मागमध्ये दुईवटा मागमा मात्र संशोधन गर्न सरकार तयार भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य राजेन्द्र महतोसँग (ने क पा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पटकपटक छलफल गरेका छन् ।
नागरिकता र भाषाको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएको राजपा नेपालका एक नेताले जानकारी दिए । ‘अरूअरू विषयमा छलफल हुँदै गर्छन्, तत्काल यी दुईवटा विषयमा छलफल गरी टुंगो लगाउन सरकार सहमत भएको छ,’ ती नेताले भने ।
भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गरेर भाषालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राजपा र फोरम नेपालको माग छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकता विवाद सम्बोधन गर्नेगरी सहमति भएको छ ।
५ भदौ २०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बहुमतले सो विधेयक अस्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसबेला बैठकमा निर्णयार्थ पेस भएको संविधानको दोस्रो संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्न सकेको थिएन । ५५३ मतमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३४७ र विपक्षमा २०६ मत परेको थियो । तर, पक्षमा परेको मत संसद्मा तत्काल कायम ५९२ को दुई तिहाइ नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । तत्कालीन समयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा फोरम र राजपाले सो विधेयकको पक्षमा र तत्कालीन एमाले र केही साना दलले सो विधेयकको विपक्षमा मत हालेका थिए ।
विधेयक अस्वीकृत भए पनि राजपा र फोरम नेपालले त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।मधेसी जनताको भावनाअनुसार जसरी पनि संविधान संशोधन गराउने भनी प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्वाचन जितेका फोरम र राजपाले सरकारमा संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।(ने क पा)ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा राजपा र फोरम नेपाललाई सहभागीका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएकोमा संविधान संशोधनलाई मुख्य सर्त बनाएर फोरम सरकारमा गइसकेको छ ।
फोरमले १४ जेठमा दुईबुँदे सहमति गरी १८ जेठमा दुई मन्त्रालय सम्हाल्दै सरकारमा सामेल भएको छ । दुईबुँदे सम्झौतामा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । सहमति भएपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि संशोधनका लागि (ने क पा) लाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले राजपा नेपाल चाँडै सरकारमा सहभागी हुन लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । उनले संविधान संशोधन र सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने काम भएमा राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने धारणा राखेका छन् । तर, राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भने सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा कुनै प्रकारको औपचारिक वार्ता नभएको बताउँछन् । सरकारले भ्रम फैलाउने काम गरेको उनको आरोप छ । पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपमा वार्ता वा छलफल गर्दै गएको भए पनि औपचारिक वार्ता नभएसम्म आधिकारिक मान्न नसकिने उनले बताए । राजधानी दैनिक